- एकीकरणका लागि सरकार छाड्न समाजवादीलाई राजपाको दबाब
एकीकरणका लागि सरकार छाड्न समाजवादीलाई राजपाको दबाब
काठमाडौंः समाजवादी पार्टीको बिहीबारदेखि राजधानीमा सुरु हुने संघीय परिषद्को बैठकले सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने भएको समाचार आजको कान्तिपुरले दोस्रो पृष्ठमा छापेको छ ।
समाचारमा लेखिउको छ, सरकारमै रहने कि बाहिरिएर राजपासँगको एकीकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउने भन्नेमा पार्टी नेताहरूबीच मतैक्य छैन । सरकार छाड्नुपर्ने राजपाको सर्तका कारण दुई पार्टीबीच लामो समयदेखि जारी एकीकरणको प्रयासले मूर्तरुप लिन सकेको छैन ।
समाजवादीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले एकीकरण र सरकारको विषय संघीय परिषद्को बैठकबाट टुंगो लगाउन चाहेको बताए । ‘सरकारको समीक्षा हुन्छ, सरकारमा रहने या नरहने भन्ने प्रस्ताव पनि आउँछ,’ उनले भने, ‘सरकार छाड्दा संविधान संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने या कसरी छाड्ने ? बस्ने नै हो भने के आधारमा बस्ने ? एउटा परिपक्व निर्णयमा पुग्छौं ।
।’ सरकारमा रहिरहने आधार आफूले नदेखेको उनले बताए । ‘संविधान संशोधनको सर्तमा पार्टी सरकारमा गएको हो, संशोधन नहुने भएपछि बसिरहने आधार छैन,’ उनले भने ।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकार छाडेर आन्दोलनमै जाने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । अनौपचारिक तहमा भने यादव तत्काल सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छैनन् । उनले पार्टी नेताहरूसँग संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिने र संशोधन प्रक्रिया अघि नबढे सरकार छाड्न उचित हुने बताउँदै आएका छन् । आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा दुई तिहाइ संख्या पुग्ने र त्यसको बलमा संविधान संशोधन गर्न सहज हुने उनको तर्क छ ।
प्रकाशित मितिः मंगलबार, कार्तिक २६, ०७:५३